Casemiro oo ka hadlay isbar-bardhiga xidigaha Vinícius Júnior iyo Neymar – Gool FM
Casemiro oo ka hadlay isbar-bardhiga xidigaha Vinícius Júnior iyo Neymar
(Real Madrid) 11 Feb 2019. Xidiga khadka dhexe reer Brazil iyo kooxda Real Madrid Casemiro ayaa ka hadlay isbar-bardhiga saaxiibkiis Los Blancos Vinícius Jr iyo xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Neymar Jr, kadib guushii ay ka gaareen kooxda Atletico Madrid.
Casemiro oo haatan 26 sano jir ah, ayaa sheegay in Neymar Jr oo ay isku dal kasoo wada jeedaan uu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican aduunka, halka saaxiibkiis Vinícius Júnior uu heysto tayada uu ugu qalmo inuu noqdo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu bixiyay kubad burburiyaha kooxda Real Madrid ee reer Brazil Casemiro kadib markii uu sheegay:
“Suuragal ma noqon karto inaan isbar-bardhigo xidigaha Neymar iyo Vinícius, Neymar waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican aduunka, halka Vinícius uu leeyahay awood weyn, waxaana uu noqon karaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican aduunka, balse waa inaan xasilooni muujinaa isla markaana aanan deg-degin”.
Si kastaba Vinícius Jr ayaa haatan waqti fiican ku qaadanaya kooxda Real Madrid, wuxuuna muhiim ka noqday qorshaha tababare Santiago Santari.
"Sarri wuxuu Chelsea ka dhigay Arsenal.".- Wax ka Xun oo aan dhihi lahaa ma jiro
“Waxaa jirta sabab dhab ah ee ka dambeysa in Solari uu iska indho tiro Isco” - Seedorf